နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသည်များ ရှောင်ရမည့် အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
Dr. Sandar Lin မှ ရေးသားသည်။ 22/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆားစိမ်ထားသောအသား၊ အခြောက်ခံထားသောအသား၊ စည်သွတ်ထားသော အသားများသည် တာရှည်ခံအောင် ပြု လုပ်ထားသော အသားများဖြစ်သည်။ ဝက်အူချောင်း၊ ဝက် ဆားနယ်ခြောက်၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဟောဒေါ့နှင့် တခြား စည်သွတ်အသားများလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားသော အသားများသည် အာ ဟာရ ပါဝင်မှုနည်းပါး သွားသည်။ ထိုအစားအစာများသည် အသားဓါတ်ပါဝင်မှု နည်းပါးပြီး မကောင်းသောအဆီနှင့် ဘေးဖြစ်စေသော ဓါတု ပစ္စည်း များစွာပါဝင်သည်။ ထိုအစားအစာများကို အမြောက်အမြား စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြံပြုချင်ပါသည်။ သင် မဖြစ်မနေစားရမည် ဆိုလျှင် တစ်ပတ်လျှင် (၆) အောင်စ ထက်ပို၍ မစားသင့်ပါဘူး။ အေးခဲထားသော အသားများသည် ပို၍ ဘေးကင်းနိုင်ပါသည်။
သန့်စင်ထားသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ပေါင်မုန့်၊ ဆန်)နှင့် ကစီဓါတ် (အာလူး) များသည် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို များစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူအများစုသည် သကြားဓါတ် ကို ကြိုက်နှစ်သက်နေသောကြောင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါသော အစားအစာများကို ပို၍စားသုံးလာ ကြသည်။ ဦးနှောက်သည် ချိုသောအစားအစာများ စားရန် တွန်းအားပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချိုဓါတ် သည် ဦးနှောက်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီ ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချို များများစားလေ သင့်ကျန်းမာရေး ပိုဆိုးလေ ဖြစ်သည်။ သကြားဓါတ်သည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အဆီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသိုလှောင်ရုံမျှမက ဆီးချိုရောဂါ ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်နှလုံး ကျန်းမာရေးအတွက် ဂျုံပါသော အစားအစာများကို ပြောင်းလဲစားသုံးသင့်ပါသည်။ ဂျုံအပြည့်ပါသော အစားအစာသည် သွေးပေါင် ချိန်နှင့် သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး သင်၏ သွေးကြောများကို ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ ဂျုံအစားအစာ များစားသုံးသော လူများသည် အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုနှင့်လေဖြတ်ခြင်းများ အဖြစ်နည်း ကြသည်။ သတ်မှတ်ထားသော သန့်စင်ပြုပြင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (Refined Carbohydrate) ပမာဏသည် တစ်ပတ်ကို (၇)အောင်စအောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သကြားပါသောအချိုရည်များမှာ ဆိုဒါ၊ ရယ်ဒီမိတ် သစ်သီး ဖျော်ရည်နှင့် အားဖြည့်အချိုရည်များပါဝင်သည်။ ၎င်း အချိုရည်များတွင် သကြားပမာဏအမြောက အမြား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁၀ ဇွန်းအထက်) ပါဝင်သောကြောင့် သင့် နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ကြော်ငြာများတွင် ပါဝင်သော ကာဗွန်အချိုရည်များသည် သကြားမပါသောအချိုရည်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အာဟာရဓါတ် လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ အမေရိကန် အာဟာရဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ပါသော လေ့လာမှုတစ်ခု၌ အမျိုးသမီး ၉သောင်း ကို နှစ် (၂၀)ကြာ လေ့လာထားရာ ယင်းတို့မှ တစ်နေ့လျှင် ကာဗွန်ပါသောအချိုရည် ၂ခွက်ထက်ပို၍ သောက်သုံးသောအမျိုးသမီးများသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ရန် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
1. Fung, T., Malik, V., Rexrode, K., Manson, J., Willett, W., & Hu, F. (2009). Sweetened beverage consumption and risk of coronary heart disease in women. American Journal Of Clinical Nutrition, 89(4), 1037-1042.
2. Avoid these foods forahealthier heart. http://www.health.harvard.edu/healthbeat/avoid-these-foods-for-a-healthier-heart Assessed October 7, 2016
3. Why Processed Meat is Bad For You. https://authoritynutrition.com/why-processed-meat-is-bad/ Assessed October 7, 2016